Koonfur Afrika oo Daah -furtay Qorshaha Guud ee Xashiishadda • Daroogada Inc.eu
Koonfur Afrika ayaa soo bandhigtay qorshaha maan -dooriyaha xashiishadda
Dowladda Koonfur Afrika ayaa soo bandhigtay qorshe guud oo loogu talagalay in si weyn looga faa’ideysto warshadaha xashiishadda ee aadka u ballaaran. Qorshahani wuxuu suurtogal u noqon karaa inuu abuuro 25.000 shaqooyin warshadaha xashiishadda wuxuuna soo jiidan karaa maalgashi shisheeye.
1 Dowladda Koonfur Afrika ayaa soo bandhigtay qorshe guud oo loogu talagalay in si weyn looga faa’ideysto warshadaha xashiishadda ee aadka u ballaaran. Qorshahani wuxuu suurtogal u noqon karaa inuu abuuro 25.000 shaqooyin warshadaha xashiishadda wuxuuna soo jiidan karaa maalgashi shisheeye.
2 $ 28 bilyan warshadaha
3 Awoodda xashiishadda
Wasaaradda Beeraha, Dib-u-habaynta Dhulka iyo Horumarinta Reer Miyiga ayaa horseeday geeddi-socod laba sano ah si loo diyaariyo istaraatijiyadda qaranka ee warshadaynta iyo ganacsiga. Waaxdu waxay toddobaadkan baarlamaanka u soo bandhigtay “qorshihii ugu weynaa ee xashiishadda”, iyada oo faahfaahin ka bixisay sidii marijuana loogu dari lahaa waaxda ganacsiga ee Koonfur Afrika taas oo qayb ka ah dadaallada socda ee dawladdu ugu jirto sharciyeynta iyo ka ganacsiga. Qorshaha waxaa ku jira casharro laga bartay wax weyn cannabissoo saarayaasha oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada, Mexico iyo Shiinaha.
$ 28 bilyan warshadaha
"Abuuritaanka warshadaha xashiishadda ayaa kala duwanaan doonta dhaqaalaha sidaa darteedna waxay kordhin doontaa kobaca dhaqaalaha, waxay abuuri doontaa shaqooyin waxayna yareyn doontaa saboolnimada," waaxdu waxay ku sheegtay soo bandhigiddeeda xildhibaannada Arbacadii. Xayiraado xagga sharciga ah, hanjabaad ah in ay la wareegaan shirkado waaweyn, hantiilayaal ah iyo kooxaha farmashiyaha ayaa loo arkaa inay yihiin caqabadda ugu weyn ee wershadaha Koonfur Afrika. Waaxda Beeraha, Dib -u -habaynta Dhulka iyo Horumarinta Reer Miyiga ayaa ku qiyaastay in warshadaha xashiishadda ee Koonfur Afrika lagu qiimeeyo $ 28 bilyan waxayna abuuri kartaa inta u dhexeysa 10.000 iyo 25.000 shaqooyin.
Qorshaha ayaa looga golleeyahay in lagu kiciyo beerista hemp iyo marijuana warshadaha cuntada, daawooyinka iyo isticmaalka madadaalada. Waxay ujeeddadeedu tahay in la kordhiyo mugga iyo noocyada kala duwan ee haramaha loo soo saaray suuqyada maxalliga ah iyo kuwa dhoofinta ee ku jira nidaam sharci iyo sharci oo wax ku ool ah.
"Qaybta xashiishadda ayaa sidoo kale leh awood aad u weyn oo lagu hormarinayo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, soo jiidashada maalgashiga gudaha iyo dibaddaba waxayna mudan tahay in lagu daro habaynta iyo soo-saarka badeecadaha kala duwan ee suuqyada maxalliga iyo kuwa dhoofinta." Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aan la furin qiimaha warshadaha xashiishadda ee Koonfur Afrika, wasaaraddu waxay sheegtay in dowladda looga baahan yahay inay wax ka qabato arrimo dhowr ah, oo ay ku jiraan sharciyeynta, qaybinta abuurka iyo dadaallada waxbarashada.
Taas awgeed waxay qeexayaan toddoba tiir oo muhiim ah:
Nidaamyada sharciyeynta ee wax ku oolka ah;
Nidaamka bixinta abuurka waara;
Cilmi -baarista iyo horumarinta;
nidaamyada taageerada soo -saaraha;
horumarinta alaab -qeybiyaha;
Wax soo saarka iyo horumarinta wax soo saarka
Sources ao businesstech.co.za en dhaqaalepost.com (Ilaha, EN)
cannabismaaliyad ahaanKoonfur Afrika
Talyaanigu wuxuu oggol yahay in si yar loo beero ilaa 4 dhir xashiishad ah oo guriga lagu beero, kadib dib-u-habeyn…
Justin Bieber wuxuu iibiyaa kala-goysyada horay loo duubay ee samafalka
Xiddigo badan oo caan ah ayaa isaga ka horreeyay oo hadda waa waqtigii Justin Bieber…
Si loo fududeeyo sharciga xashiishadda caafimaadka ee Thailand, cannabidiol (CBD) ayaa la soo saarayaa ...